Hutsva "matambudziko" angave ari padyo neApple Watch | Ndinobva mac
Apple inoronga kuwedzera "matambudziko" matsva ewatchOS 5.1.2 yakasarudzika yeApple Watch Series 4 mudanho reInfogram uye Modular Infogram. Iyi inhau inosvika kunetiweki mushure mekunge yazvino vhezheni yakaburitswa nezuro masikati yaburitsa ruzivo nezve "hutsva" hutsva hwemawachi eApple
Isu tinoda pfungwa yekukwanisa kuwedzera zvemuno kunyorera pamawadhi kumeso senge Meseji, iyo Home app kushandisa HomeKit, Remote kana, semuenzaniso, foni yacho "kuomesa" kudaidza mumwe munhu, uye izvi ndizvo chaizvo zviri kuuya mune inotevera vhezheni yeOSOS kana zvese zvikafamba sekuronga.
Zvese zveApple Watch Series 4
Zviripachena Apple inoda kuti isu tishandise mari pazvigadzirwa uye izvi zvinoita izvi zvidiki "shanduko" kune yakasarudzika nhevedzano yezvigadzirwa senge itsva Apple Watch Series 4 uye iyo Infogram uye Modular Infogram spheres. Nezvo Apple inoona chega kusarudzika kune vashandisi vanotenga michina iyi uye vanoita kuti vamwe vese vafunge nezve kuchichinja. Ichokwadi ndechekuti zvinoita sekusina kurongeka kwatiri sezvo chiri chinhu chingashandewo mune mamwe maApple Watch mhando, asi ichi chinhu chinoitwa nemakambani ese uye kwete ehunyanzvi chete, kana iwe ukatenga chero chinhu chitsva kana vhezheni yakakwirira kupfuura iyo yatinotova nayo zvinoitika.
Parizvino izvi zvinosvika pane inotevera vhezheni yeOSOS zviri pamutemo asi kana iwe uine Series 4 ine watchOS 5.1.1 beta uye iyo iPhone ine iOS 12.1 iwe unozogona kuvaona muiyo iPhone Watch app. Chero zvazvingaitika, zvakanakisa kumirira iyo yekupedzisira vhezheni uye kudzivirira matambudziko neiyo betas, iyo yaunotoziva izvozvo beta shanduro paApple Watch haigone kubviswa kana yaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Hutsva "matambudziko" angave ari padyo neApple Watch
Tsvaga mafaera emimhanzi pakomputa yako neDuplicate Music Cleaner
Ziva kutenderera kwemwedzi nekukurumidza nechishandiso cheMwedzi Phase